Ngaba ubukhe wabona i-999 kutsha nje? Khuthala ukuba ukhokelwe apha ukuze ufumane malunga nentsingiselo ye-999.
Ukubona ukuphindaphinda amanani aphindwe kathathu, anjenge-999, ayisiyongxaki leyo. Ngapha koko, ngasemva kwepatheni nganye yamanani oyibona rhoqo, kukho umyalezo weengelosi ofihliweyo ovela kuwe kwiNdalo iphela.
Ukuba ubona inombolo i-999 rhoqo, intsingiselo yokomoya ye-999 ihlala inxulumene nokuphela komjikelo ebomini bakho. Yindlela yokuvala ukucima ukungazalisi izinto ukuze ulungiselele umjikelo omtsha. Kokubini kukuphela kwemikhwa yakudala, iinkolelo, kunye nobudlelwane kunye nokuqala kobutsha. Xa ubona i-999 ngokuphindaphindiweyo, lixesha lokuba ukhulule elidlulileyo, ufunde kwimiba yakudala, uzixolele kunye nabanye, kwaye uqale inkqubo yokuphilisa ube yeyona nguqulelo inamandla, enamandla kakhulu kuwe . Uya kwinqanaba elilandelayo!
Umyalezo obalulekileyo ngk nikela ingqalelo ngakumbi kwiziqalo kunokuphela. Gxila kumandla akho kwinkqubela phambili kumjikelo olandelayo wobomi bakho. Gcina ukhumbula ukuba xa ubona ukuphindaphinda ama-999, kukho iintsingiselo ezininzi,kwaye kubalulekile ukusebenzisa i-intuition yakho ukufumanaIthetha ntoni i-999 kuwe. Ukukunceda ukukhokela,nazi ezi-5Iintsingiselo zokomoya ze-999 kunyeizizathu zokuba uqhubeka ubona inani leengelosi999naphi na.
Intsingiselo yokuqala ye-999: Ukulungele ukwenza utshintsho lweziQalo ezitsha
Ingelosi inombolo 999 luphawu lokukwazisa ukuba ezinye iinxalenye zobomi bakho ziya esiphelweni nasekugqityweni. Isikhuthazo esomeleleyo oziva ukuba Isiphelo sizama ukukuhambisa kwikhondo elifanelekileyo . Ndiyathemba ukuba i-Universe ikwinkqubo yokukukhokelela kwindlela elungileyo eyilelwe nje injongo yakho yobomi. Xa ulandela iminqweno yakho, uya kukhokelwa kwimpumelelo emiselweyo.
Phambi kokuba utshintshele kwisahluko esilandelayo, hlela ezakho izimvo, izicwangciso kunye neenjongo zokukulungiselela inqanaba elilandelayo. Cinga ngabo bonke abantu kunye neeprojekthi ebomini bakho kwaye uthathe isigqibo sokuba ngaba uziva eyokusebenzela injongo yakho kumjikelo olandelayo. Gxila kwaye uqhubeke kuphela eyona nto uyifunayo kwaye uya kufumana yonke into oyifunayo. Emva koko, faka izicwangciso zakho xa uqala umjikelo olandelayo.
Nokuba yimeko engalindelekanga eyenzeka ebomini bakho okanye into oyenze ngabom, isiphelo asisiyonto ilusizi. Isiphelo yindlela yokuyicoca indlela yamava amatsha ukuze usondele kubomi bakho .
Ndiyabulela ixesha elidlulileyo ngezifundo zakho kwaye ulishiye apho lifanelekile khona ukuze wenze obona bomi busalindele ukuzalisekiswa nguwe kuphela.
Gcina ukhumbula ukuba ubomi bakho buqala kwakhona ngendlela entsha. Inqaku kwibali lakho apho uguqula iphepha, kwaye usiya kwesinye isahluko. Ulwazi lwakho lwangaphakathi ngoku lomelele kunakuqala kwaye kufuneka uthembele kwiimvakalelo zakho. Yenza ifuthe kwaye yenza ixabiso kulo mhlaba ngokubonisa umhlaba onokukwenza-ngo ukuyenza . Yenza umhlaba ube yindawo engcono yethu sonke. Unokukhanya okukhanyayo kuwe njengoko udlala indima yakho eyodwa kulo mhlaba.
Khumbula oku: Kuyintsikelelo ukuba nguwe kwaye okona kubalulekileyo yile nto ukhetha ukuyenza ukusuka apha.
'Ukuba unesibindi sokuvalelisa, ubomi buza kukuvuza ngomolo omtsha.'-UPaulo Coelho, umbhali, Ingcali yemichiza
Intsingiselo yesibini ye-999: Yamkela iNdalo iphela inesicwangciso esingcono kuwe
Ukubona i-999 luphawu oluvela kuThixo ulawulo lokukhulula wento ethile ebomini bakho ekufuneka iwele ngaphandle ukuze wenze indawo yento entsha.
Ngamanye amaxesha, kwenzeka isiganeko esibuhlungu ukufumana ingqalelo yakho kwaye ikubonise ukuba nokuba ubuzame kangakanani ukubambelela emsebenzini, ubudlelwane, okanye nawuphi na omnye umcimbi, awunakulawula.
Xa ungakwazi ukulawula zonke iinkcukacha zobomi bakho nayo yonke enye into isilele kwaye ushiyeke emadolweni ungenaso esinye isisombululo, lixesha lokuba ucele ngokunyanisekileyo i-Universe ukuba ithathe indawo. Kulapho uvumela amandla aphezulu akubonise indlela ebhetele. Ayisiyo malunga nokuyeka, kodwa kumfanekiso omkhulu, indalo iphela inesicwangciso esingcono kuwe.
Unokuqonda ukuba lixesha lokuba uyeke umsebenzi obambelele kuwo, kuba ngokwenyani, loo msebenzi awuyiyo eyona nto uyiyo. Uqala ukuphalaza zonke izimvo onazo ngawe kunye nazo zonke izinto ofuna ukuba ube yiyo kwaye ube yiyo.
Xa uyeka ukuhamba kwesiphumo esithile kwaye uzibeke ezandleni zamandla aphezulu, iingcango ezintsha ziqala ukukuvulela, kwaye kuvela ii-epiphanies.
Kulapho uqala ukubona ngokucacileyo ukuba yintoni elungileyo kwaye yintoni ekufuneka itshintshe ebomini bakho. Umzekelo, ubudlelwane obunothando obuthembele kubo ngequbuliso buguquke bubambiswano lweshishini obungalindelanga ukuba luze. Umyalezo obalulekileyo ngk Yamkela ubunyani bayo eyona nto iphambi kwakho endaweni yokuzama ukuyinyanzela kwenye into .
Ke xa ubona i-999, intsingiselo kukuyeka yonke into ocinga ukuba uyiyo kwaye ukholelwa ukuba ubomi buyintoni, kwaye vumela amandla endalo iphela akukhokele kwicala elifanelekileyo .
Ngamazwi obulumko esithandi sobulumko saseTshayina uLao Tzu, 'Ngokukuyeka, konke kuyenzeka ...'
kutheni 11 11 ndithetha
Intsingiselo yesithathu ka-999: Amandla oxolelo atshintsha ikamva lakho
Ukubona ipateni yamanani 999 luphawu lokuba uphethe amanxeba angavulekiyo kunye netyala elidlulileyo. Nangona kuyinto eqhelekileyo ukuziva ubuhlungu, indalo iphela ikukhuthaza ukuba uye kwisahluko esilandelayo sobomi bakho kwaye oku kufuna ukuba uyeke ukuphindaphinda iinkumbulo ezingathandekiyo ezikubuyisela emva.
Ukuqhubela phambili kwinqanaba elilandelayo lokukhula ngokomoya, susa naziphi na iimvakalelo ezikrakra ezichaphazela indlela yakho yokucinga kwaye uthathe amandla akho okuqhubela phambili kwimishini yakho yobomi.
Umthetho weSizathu kunye nesiphumo uchaza ukuba nantoni na oyikhuphileyo kwindalo iphela ibuyiselwa kuwe . Oku kuthetha ukuba ukubetha umva kwabo bakonzakalisileyo ngekhe kuzise uxolo kuwe nakwizizukulwana ezizayo zosapho lwakho. Oku kubandakanya ukunqamla kunye nokuvala intliziyo yakho emntwini owonzakalise njengendlela yakho yokuzikhusela. Gcina ukhumbula, ukunqamla luhlobo lwesohlwayo xa umntu okwenzakalisileyo efuna ukuxolelwa kwaye nguwe kuphela onokukunika. Kungenzeka ukuba woyike ukubuyela ekubeni ungabinamandla ukuba uyaxolela. Ke umyalezo obalulekileyo kukuba xolela ukuze uphume kumjikelo wekarmic wenzondo .
Xa uzihlolisisa, ungafumanisa ukuba kukho inxenye yakho efana nalo mntu uzama ukumxolela. Ukusuka kolu luvo, oku kuya kukunceda uqaphele ukuba wena kunye nomnye umntu anifani kakhulu. Ngaphambi kokuba uxolele abanye, kufuneka uzinyange ngokwakhoukukhulula ukuphoxeka buqu kunyeukuthatha uxanduva lweemvakalelo zakho. Emva koko, unokuzisa uvelwano kunye noxolelo kuwe nakwabanye.
Ngaphezu kwako konke, xa abantu bekwenzakalisa kwixa elidlulileyo, bebesenza konke okusemandleni abo kuloo meko kunye noko bakufundileyo. Abanye abantu banokungabi nabubele, kodwa yazi ukuba abakazifundi zonke izifundo zabo okwangoku. Oku kuthetha ukuba bayazi kuphela indlela yokujongana nemiceli mngeni yobomi ngezixhobo 'abazinikiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Kumfanekiso omkhulu we-Universe, abanye abantu kwibali lobomi bakho baneendima ezincinci zokudlala kwaye abanye baneendima ezinkulu kakhulu. Nokuba ngubani odlala 'umntu olungileyo okwenze wahleka' okanye 'umntu ombi owonzakalisileyo,' qonda ukuba bonke abalinganiswa bayimfuneko ekukhuleni komphefumlo wakho.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, xa uxolelo lokwenyani lusenzeka, kukho utshintsho olunamandla olutshisa inkqubo yokuphilisa ngaphakathi kwakho kwaye kubangela isiqalo esitsha sobabini kunye nomnye umntu . Amakhonkco aqhawukile kwaye ukhululeke.
Umbhali waseMelika uJonathan Lockwood Huie uthe kungcono: 'Ukuxolela ayisosipho somnye umntu. Ukuxolela sisipho sakho kuwe. '
Intsingiselo yesi-4 ka-999: Chaza ukuba uzalelwe ukuba ungubani
Xa ubona i-999, oko kunokuthetha ukuba ukulungele ukubonisa ubuntu bakho kwaye uthethe ulwimi lomphefumlo wakho. Le nkqubo yokuyila kukucamngca ngesenzo apho usebenza khona ngezimvo ezintsha ukwenza kunye noMhlaba.
Unokukhetha ukuba wedwa ukumamela iminqweno yakho enzulu ukuze ukwazi ukufikelela kwiindawo zakho ezingcwatyelweyo. Ufumanisa ukuba nantoni na oyivezayo kwaye uyile ibonisa umhlaba wakho wangaphakathi-iingcinga zakho, iimvakalelo zakho, kunye neenkanuko zakho.
Nokuba uzichaza ngeendlela zobugcisa ezinje ngokubhala, ukuzoba, ukucula, ukudanisa, okanye kwanokurhweba ngamashishini, yabelana ngohambo lwakho njengoko luqhubeka kwaye ungakhathali nokuba abanye bacinga ntoni ngawe. Ufumana ithuba lokuba sisibane esikhanyayo xa uchaza eyona nto uyiyo . Uba yinkokeli ngalo mzuzu ubeka wena phaya.
Xa uguqula uphawu lwakho olwahlukileyo kwimishini yakho yobomi, italente yakho ekhethekileyo iya kufumana indlela eya kubantu abathile abayilindeleyo -kanye njengokuba injalo. Khumbula, kuhlala kukho indawo yokuphucula, ke qala nje ngento onayo kwaye uyiphucule apha endleleni.
Xa uphila ukuthanda kwakho, uveza icala lakho lokuyila, ukuzithemba kwakho kuyavela, ubomi buqala ukuqhubela phambili njengoko ufeza okungakumbi, kwaye ezinye iinxalenye zobomi bakho zizaliswa yimisebenzi ekuzisela uvuyo. Ekugqibeleni, eyakho Ukuzibonakalisa kwakho kuzala inyani entsha kubo bobabini umphefumlo kunye nehlabathi .
Ukubona i-999 kukukhumbuza ukuba uphila umbono wakho wobomi kwaye injongo yakho kukubonisa ubuchule bakho obuyingqayizivele ukwenza eli lizwe libe yindawo engcono kubo bonke. Ngomfanekiso-ngqondweni, isenzo sizisa izimvo zakho ebomini , Kwaye konke kuqala ngenjongo yakho.
Khumbula, ukuvakalisa inyaniso yakho yeyona ndlela yobugcisa ibalaseleyo-umsebenzi wobugcisa wobomi bakho-kuba nguwe wedwa onokuyenza. Kwimbali yendalo iphela, kuya kubakho into enye kuphela eyoyikekayo!
Ubomi bakho mabube ngumsebenzi wobugcisa. Sonke sikulindile!
Intsingiselo yesi-5 yowe-999: Yiba seNkonzweni kwinto enkulu kunawe
Ukubona i-999 ngokuphindaphindiweyo ngumqondiso ovela kwi-Universe ukuba lixesha lokwenza impembelelo kwihlabathi ngokukhonza abanye ngokukhula kwakho ngokomoya.
U-Leo Tolstoy, umbhali wenoveli wase-Russia, owaziwa njengomnye wababhali abaphambili bexesha lonke wathi, ' Eyona ntsingiselo yobomi kukusebenzela uluntu . ' Xa wamkela inkonzo njengeyona ntsingiselo yobomi, uya kuqala ukubuchaphazela ngokuqinisekileyo ubomi babanye abantu abakungqongileyo, kwaye le ndlela iya kukhokelela kutshintsho olukhulu kwikamva elingcono kwihlabathi lethu.
Ngokubalulekileyo, ukuba kwinkonzo kwabanye okanye isenzo sokupha siza ngeendlela ezahlukeneyo. Njengomzekelo, ukwenza okusemandleni akho sisenzo senkonzo enkulu kuba unika abanye abona bantu bakho 'ubalaseleyo' ngobubele bokwenyani. Joyina isizathu sokunceda okanye ufumane umntu onomdla wokukhonza. Nokuba unxibelelana nomntu ongenamakhaya kwinqanaba elinemfesane, ukunceda umntu osebenza naye oziva exakekile emsebenzini, ukunceda ummelwane, ukukhathalela abantu abadala, okanye ukubhala nje inqaku lombulelo kumntu ochaphazele ubomi bakho, wena Ndiyakufumanisa oko 'izipho' oziphayo ziya kubuyela kuwe kalishumi .
Ngokuphathelene noku, ulapha ukusebenzela uluntu oluya kuthi lubangele imeko enzulu yoxolo emhlabeni. Uxolo ayisosipho soMdali emhlabeni. Uxolo sisipho sabantu omnye komnye .
Ngokubanzi, isenzo sokupha siphucula ubomi babantu onxibelelana nabo. Kwaye ngenxa yokuba izenzo zakho zithetha kakhulu kunamazwi, ububele bakho buya kugqithiselwa kwabanye, kwaye bunokuphindaphindeka kwaye buchukumise nangakumbi ubomi babantu. - Okokugqibela, ukwenza umahluko kweli lizwe kunye nokwenza indawo engcono kuthi sonke.
Ngokomoya, xa usebenza nabanye, oku kuthetha ukuba i-ego yakho iyanyibilika, kwaye uzivumela ukuba ube 'ngumbhobho ongenanto' amandla oMdali othando ahamba aphume angene ehlabathini. Ngokusisiseko unika amandla avela kuMthombo wawo onke amandla. Kwaye la mandla ahamba kuwe ngamandla aphilisa uluntu. Ngale ndlela, xa unika abanye, usasaza amandla othando .
Ekugqibeleni, uyakufumanisa ukuba ubomi bakho bunentsingiselo yokwenene xa ukhonza uluntu. Khumbula, sonke silapha ukuze sincedane . Kwaye ngokunceda abanye, siyaphakama kunye. Kungenxa yesi sizathu ulapha kwasekuqaleni.
'Eyona ndlela yokuzifumana kukuphulukana nabanye abantu.' - UMahatma Gandhi, iNkokeli yokomoya kunye nezopolitiko (1869 - 1948)
Yintoni omele uyenze ngokulandelayo xa ubona i-999?
Umjikelo olandelayo wobomi bakho uya kufuna ingxelo entsha yakho.
Xa ubona i-999, ukhona ukukhokelwa kwezona 'zibalaseleyo.' Ukufumana umbono wokuba ngubani otshintsha kuye, jonga imisebenzi yakho yemihla ngemihla kunye nemikhwa. Ngaba utsaleleka ekuhloleni ezinye iindlela zonyango, ufunda iincwadi zophuhliso lomntu, ukuziqhelanisa nokucamngca, okanye ukufunda ngeemfihlakalo zoMhlaba? Khumbula, into oyenzayo namhlanje izaku dala ingomso lakho .
Musa ukulibala: Nantoni na eyenzekileyo kufuneka ihlale kwixesha elidlulileyo, kwaye kukuwe ukudala inyani yakho entsha. Ixesha elidlulileyo lenziwe ngoku. Umzuzu kuphela ngexesha elikhoyo ngoku NGOKU. Yonke into eyenzekileyo kukukhumbula nje lo msitho ngalo mzuzu. Nanini na xa usizisa izinto zangaphambili ukuya kwixesha langoku, unokunika enye intsingiselo kubo, kwaye ekugqibeleni, utshintshe yonke imbali yakho. Ngale ndlela, ungumntu owahlukileyo ngomzuzwana ngamnye, ngawo onke amaxesha NGOKU.
Okona kubaluleke kakhulu, yiba nomonde kwinkqubo kwaye uqaphele imiqondiso kaThixo ethunyelwa kuwe ivela kuMdali ongapheliyo okanye izikhokelo kunye neengelosi zakho. Cwangcisa imiyalezo, umamele ilizwi entliziyweni yakho, ufumane ulwazi kunye nobulumko, kwaye uthathe amanyathelo ukuze ujonge apho ubomi bakho bukusa khona.
Kumfanekiso omkhulu, intsingiselo ye-999 kukuba usendleleni yokwanda kokomoya. Uqala ukuzibona uyinxalenye yento enkulu kwaye uyaqonda ukuba zonke izinto zivela kuMthombo omnye weNdalo iphela - NguThixo. Ngenxa yokuba uvela kuMthombo, wena unguThixo. Kwaye xa uyiqonda le nyaniso kwaye uzilungelelanise nale nyaniso, uqala ukukholwa ukuba unokwenza nantoni na - akukho mida kwinto onokuyenza.
Khumbula: Kuya kufuneka wenze utshintsho ukuba ulindele ukubona utshintsho . Thatha nje inyathelo elinye uye phambili. Linyathelo elinye elincinci kuwe, kodwa linyathelo elikhulu kuluntu.
Bye Bye Amagundane: AbaMnyama kunye ne-amp Decker abaPhindayo bePest
I-Anou: IiRugs zaseMorocco, ngqo kuMthombo
Kutheni iKirkwood, eMissouri yenye yeendawo ezipholileyo eMelika
BaBuchitha njani uBuntu bePropathi uBusuku babo oGqibeleleyo ngaphakathi
lithetha ntoni 411 ngokwasemoyeni
Uthando lwenombolo ye-1122
Inombolo yeengelosi ezingama-411 ezinentsingiselo